umshini wokugaya okusanhlamvu okusanhlamvu wokugaya ummbila wokuthengisa imakethe yase-Afrika
Umshini wokusanhlamvu okusanhlamvu ungagaya izinhlobo ezahlukene zezinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe, njengembila, ukolweni, soya, umunyu,umdumbula, utshani, imivini, amazambane omile, ukudla kwamaqabunga. Ngaphandle kwesicelo esishiwo ngenhla, umshini wokugaya umgubo wommbila nawo usetshenziselwa ukushaywa ngokushesha kwepulpiti yamaphepha, ukuncishiswa kwamakhambi okwelapha aseChinese nokudla okumanzi okugaya ukudla okunjengezithelo ezintsha, ubhatata, umlotha omanzi.Omshini wokugaya ummbila uthunyelwe eKenya,Ukuhamba,I-Angola,ETanzania,ESudan,I-Negeria njll. Ngokujwayelekile umshini wokugaya okusanhlamvu we-dizeli ulusizo kubasebenzisi base-Afrika abangasetshenziswa endaweni yokushoda kukagesi.
Umsebenzi Isimiso somshini wokugaya okusanhlamvu
Umshini wokusanhlamvu okusanhlamvu ngokuyinhloko uqukethe i-feed hopper,umzimba wokugaya, shayela imoto, ifreyimu njll. Umzimba ne-rotor ukuhlangana kwakha igumbi lokuchotshozwa, rotor umhlangano Igumbi izingxenye main ukusebenza, izinto ezishisiwe egumbini lokuchotshozwa kuqediwe. Lapho impahla ingena egumbini lokuhlikihla, ngengxenye eyindilinga kanye nefulethi yamaphutha egiya lamazinyo futhi usebenze, izinto eziphukile zibe yimpuphu ecolekile ngokushesha nokwakheka kwe-plasma, ke ukuhamba komoya emsebenzini wamandla we-centrifugal, izinto ezigayiwe ngokusebenzisa ngesihlungo zingena emgodini wokukhipha umshini wokugaya ummbila.
Inzuzo yomshini wokugaya ummbila
1.Kuyathengiswa imishini yokusebenzela okusanhlamvu eminingi,lungasetshenziselwa ummbila,ukolweni, amabele, ubhontshisi namanye ama-grian milling,lungasetshenziswa nezinongo .
2.Umshini wokugaya ummbila onesakhiwo esilula ngohlobo oluqondile ,ukufakwa lula nokufakwa.
3.Ukusetshenziswa kwamandla amancane nomshini wokugaya ummbila osebenza kahle,Idizayinelwe ukuhlinzeka ngokuphepha okuphezulu nokuhanjiswa kwendle. Ukulungiswa okuguqukayo, ukufaka okulula nokusebenza.
4.Izinketho zamandla amaningi,umshini wokugaya ummbila ungashayela ngenjini yedizili,uphethiloli,i-motro.gesi yohlaka lomshini lungenziwa ngokuya ngesimo samandla.
5.Ukugqama kwemikhiqizo yokugcina kuncike ngosayizi we-mesh yesikrini.I-mesh yesikrini ingenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini wokugaya ufulawa wokusanhlamvu
(kg / h) Amandla
(kw) Usayizi wesikrini
Iyakwazi ukuguquguqulwa 0.43*0.6*0.65
I-VTFZ600 1000~ 1500 22 1.8*1.6*1.45